Cusboonaysiinta Basaska - Dugsiyada Dadweynaha Aagga Stillwater ISD 834
Taariikhda caqabadaha gaadiidka
Khamiistii, Sebtember 2, 2021 - maalmo uun ka hor inta aysan ardayda dugsiga hoose ku soo noqon dugsiga - degmada ayaa ku wargelisay iibiyaha gaadiidleyda in aysan awoodin inay daboosho dhammaan waddooyinkeeda qandaraaska. Degmadu waxay qaaday tallaabo ay kaga doonayso iibiyaha inuu fuliyo waajibaadkiisa qandaraaska maalinta ku xigta. Waxaan sidoo kale la xiriirnay qoysaska si aan u ogeysiino waddooyinka aan buuxin. Tan iyo markii aan barannay waddooyinka aan la buuxin, waxaan la xiriirnay adeeg -bixiyeyaal kale oo raadinaya kiraystayaal, basas, ama basaska kale ee iskuulka - laakiin illaa hadda ma aanan guulaysan. Waxaan sidoo kale la shaqaynaynay iibiyaha si aan u sii wadno qorista darawalada basaska cusub. In kasta oo dariiqyo dheeri ah uu daboolay iibiyaha toddobaadkan, arday badan ayaa weli adeeg la'aan ah waqtigan.
Fadlan ogow in helitaanka waddada laga yaabo inay isbeddesho. Waxaan ku dadaali doonaa inaan bixino isgaarsiinta sida ugu dhaqsaha badan markaan ka war helno wixii cusbooneysiin ah.
Xaraashka waxaa bixiya Shabakada Gaadiidka Magaalada
Farriinta Basaska ee Kormeeraha Guud Lansfeldt
Waxaan sii wadnaa inaan ka shaqeyno sidii aan u abuuri lahayn adeegyo gaadiid oo xasilloon oo lagu kalsoonaan karo
Hoggaamiyayaasha degmadu waxay ku dadaalayaan inay xalliyaan caqabadaha gaadiidka ee socda iyagoo dib u hagaajinaya basaska si ay diiradda u saaraan darawalada jira si ay ugu adeegaan arday badan intii suurtogal ah. Waxaan sidoo kale samaynaynaa isbeddello si aan u abuurno xarumo xaafadeed iyo sahaminta hagaajinta bilowga iyo dhammaadka dugsiga si aan u siino waqti basaska qaarkood ay maraan waddooyin laba -laab ah.
Nasiib darro, isbeddelladani waxay carqalad u keeni doonaan xitaa qoysas badan oo ku nool degmada. Tallaabooyinkan waa ku meel gaar, laakiin waa lama huraan. Qoysaska ay saameeyeen isbedeladan ayaa loo diri doonaa faahfaahinta labada toddobaad ee soo socda.
Ku -meelgaar 2 mayl oo aan lahayn aag bas
Gobolku wuxuu u baahan yahay inay degmadu siiso gaadiid kooxo gaar ah oo arday ah, oo ay ku jiraan kuwa ku nool 2 mayl ama ka fog dugsiga iyo ardayda naafada ah ee u baahan gaadiid khaas ah. Degmadu waxay hadda siisaa basaska dhammaan ardayda dugsiyada hoose ee ku nool .5 mayl dugsiga ama ka badan, iyo 1 mayl ama ka badan ardayda dugsiga sare. Adeeg la’aanta dhammaan waddooyinkan, waa in aan mudnaanta siinnaa kheyraadka xaddidan waddooyinka dawladdu amartay. Nidaamka mudnaanta leh ee aan si ku meelgaar ah u meelmarin doonno wuxuu ka koobnaan doonaa laba heer:
Mudnaanta 1: Ardayda ku nool 2 mayl ama ka badan dugsiyada; ardayda naafada ah ee u baahan gaadiid khaas ah; iyo kuwo kale oo sharcigu farayo inay gaadiid qaadaan
Mudnaanta 2aad: Ardayda ku nool meel u jirta 2 mayl dugsigooda; iyo kuwa kale ee aan xaq u lahayn gaadiidka
2 mayl ee aagga baska ma jiro waxaa loola jeedaa qoysaska ku nool meel 2 mayl u jirta dugsiga oo aan lahayn bas la heli karo waa inay helaan gaadiid kale. Tani waa xaalad ku -meelgaar ah inta lagu jiro gurmadka gaadiidkaan oo hadafkayagu waa inaan dib u bilowno adeegga caadiga ah sida ugu dhakhsaha badan. Qoysaska si toos ah ayaa loo wargelin doonaa haddii ay saamayn ku yeelan doonto isbeddelkan.
Xarumaha ku meelgaarka ah ee xaafadaha
Si kale oo kor loogu qaado wax -ku -oolnimada, waxaannu abuuri doonnaa xarumo xaafadeed. Joogsiyada basasku waxay u oggolaan doonaan hal bas inuu hal mar joojiyo xaafadda, halkii uu marar badan joogsan lahaa. Tani waxay ka dhigan tahay in ardayda qaar ay tahay inay hore u sii socdaan ilaa joogsigooda, laakiin waxay u oggolaan doontaa in waddooyinka si dhakhso leh loo dhammaystiro, taasoo u oggolaanaysa wareegga labaad ee qaadista dugsiga. Jidadka basaska cusub iyo waqtiyada soo-qaadista/dejinta ayaa loo diri doonaa qoysaska ay saamaysay.
Waqtiyada bilowga iyo dhammaadka dugsiga
Hoggaamiyayaasha degmadu waxay filayaan in isbeddelada kor ku qoran ay qayb ahaan xallin doonaan arrinta gaadiidka. Waxay u badan tahay in loo baahan doono tallaabooyin dheeraad ah si loo daboolo waddooyinka basaska ee gobolku amro. Shaqaaluhu waxay sahaminayaan suurtogalnimada inay isku hagaajiyaan wakhtiyada bilowga iyo dhammaadka dugsiga qaar ka mid ah dhismayaashayada si loogu oggolaado basaska inay maraan waddo labaad (labalaab) si ay u soo qaadaan arday badan. Waqtiyada gambaleelka ayaa u baahnaan doona in lagu hagaajiyo ugu yaraan 30 daqiiqo dugsiyada qaarkood. Shaqaaluhu waxay baranayaan ikhtiyaarka waxayna u soo bandhigi doonaan macluumaad dheeraad ah guddiga dugsiga maalmaha soo socda.
Isbeddelka gaadiidku wuxuu saamayn doonaa boqollaal arday
Waxay qaadan doontaa ilaa 2 toddobaad in la diyaariyo waddooyinka cusub iyo in la aqoonsado waddooyinka mudnaanta leh. Qoysaska ay saameeyeen isbeddel kasta oo ku yimaadda adeegga ama la -qabsiga waddooyinka baska ayaa la ogeysiin doonaa sida ugu dhaqsaha badan.